News | विश्वकप क्रिकेट
News | Tag: विश्वकप क्रिकेट
अर्कै मुलका खेलाडी जसले इंग्ल्यान्डलाई विश्व च्याम्पियन बनायो
एजेन्सी । आईसीसी विश्वकप क्रिकेटको १२ औं संस्करणको उपाधि इंग्ल्याण्डले जित्यो । आयोजक राष्ट्र इंग्ल्यान्डलाई जित दिलाउन सबै खेलाडीको योगदान उच्च रह्यो । इंग्ल्याण्डको स्क्वाडमा रहेका १५ खेलाडीमध्ये ७ खेलाडी इंग्ल्यान्डकै नभई अर्कै मुलका खेलाडीहरु रहेका छन् ।
एजेन्सी । इंग्ल्याण्ड र वेल्समा सम्पन्न १२ औं संस्करणको विश्वकप क्रिकेट आइतबार सम्पन्न भएको छ । न्यूजिल्याण्डलाई हराउँदै पहिलो पटक आयोजक राष्ट्र इंग्ल्यान्डले उपाधि जितेको हो । विश्वकपको समाप्तिसँगै अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ले विश्वकपको ‘टिम अफ द टुर्नामेन्ट’ सार्वजनिक गरेको छ ।
न्युजिल्याण्डलाई पराजित गर्दै विश्वकप क्रिकेटको उपाधि इंग्ल्याण्डले जित्यो
काठमाडौं । इंग्ल्याण्डले विश्वकप क्रिकेटको उपाधि जितेको छ । गएराति सम्पन्न फाइनल खेलमा घरेलु टोली इंग्ल्याण्डले सुपर ओभरमा न्युजिल्याण्डलाई पराजित गर्दै उपाधि जितेको हो ।
न्यूजिल्याण्डको दोस्रो विकेट पनि झर्यो
काठमाडौँ । इंग्ल्याण्ड र वेल्समा चलेको १२ औं संस्करणको विश्वकप क्रिकेटको लगभग डेढ महिने महासंग्रामको आज अन्त्य हुँदैछ । अर्थात् विश्वले क्रिकेटको आज विश्वकपको १२ औं विश्वबिजेता प्राप्त गर्दैछ । जसअनुरुप न्यूजिल्याण्डले टस जितेर ब्याटिङ गर्दैछ ।
विश्वकप क्रिकेटः न्यूजिल्याण्डको पहिलो विकेट झर्यो
काठमाडौँ । न्यूजिल्याण्डको पहिलो विकेट झरेको छ । इंग्ल्याण्डमा जारी विश्वकप क्रिकेटको उपाधि भिडन्तमा न्यूजिल्याण्डका ब्याट्सम्यान मार्टिन गप्टिलको विकेट झरेको हो । गप्टिलले १८ बलको सामना गर्दै १९ रन जोडे । उनको विकेट वक्सले झारेका हुन् ।
कसले हत्याउला विश्वकप क्रिकेटको उपाधि ? यस्ता छन् दुवै टिमका बलियो र कमजोर पक्ष
काठमाडौँ । आज विश्वका सम्पूर्ण क्रिकेट समर्थकहरुको ध्यान लन्डनको लड्र्स मैदानमा हुने न्यूजिल्याण्ड र इंग्ल्याण्डबीचको खेलतर्फ जानेछ । विश्वमा फुटबलपछिको दोस्रो चर्चित खेल क्रिकेटले आज १२ औं संस्करणको विश्वविविजेता पाउनेछ । यी दुईमा कसले बाजी मार्ला भन्नेमा फरक अनुमान आउँदै आएका छन् ।
आज विश्वकप क्रिकेटको फाइनल, विजेताले कति पुरस्कार पाउँछन् ?
काठमाडौँ । गत ३० मे बाट सुरु भएको १२ औं संस्करणको विश्वकप क्रिकेट उपाधिको छिनोफानो आज हुँदैछ । आज विश्वले नयाँ क्रिकेट विश्वकप विजेता पाउँछन् । आज नेपाली समयअनुसार दिउँसो सवा ३ बजे लन्डनको लड्र्समा उपाधिको लागि आयोजक राष्ट्र इंग्ल्यान्ड तथा न्यूजिल्यान्ड भिड्दैछन् । यी दुवै राष्ट्र यसअघिका विश्वकपमा अभागी बनेका थिए । सोही कारण दुवै राष्ट्रलाई उपाधि जित्ने धोको छ ।
इंग्ल्याण्डविरुद्ध अष्ट्रेलियाको खराव सुरुवात, फिन्च र वार्नर पेभिलियन फर्किए
काठमाडौँ । विश्वकप क्रिकेटको सेमिफाइनलमा साविक विजेता अष्ट्रेलिया र आयोजक राष्ट्र इंग्ल्याण्डबीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । ब्रिमिङहाममा भइरहेको खेलमा अष्ट्रेलियाले टस जितेर ब्याटिङ गरिरहेको छ ।
यी ५ कारणले गर्दा भारतको विश्वकपकाे उपाधि जित्ने सपना तुहियो
एजेन्सी । जारी संस्करणको विश्वकप क्रिकेटको उपाधि जित्ने सपनामा न्युजिल्याण्डले तगारो हालिदिएको छ । बुधबार राति सम्पन्न सेमिफाइनलको खेलमा भारत न्यूजिल्याण्डसँग १८ रनले पराजित भएको हो ।
भारत र न्यूजिल्याण्डको खेलमा सबै पूर्वानुमानहरूले हावा खाएपछि...
काठमाडौँ । इंग्ल्याण्ड र वेल्समा जारी १२ औं संस्करणको विश्वकप क्रिकेट अन्तिम चरणमा पुगेको छ । समूह चरणको खेल सकिएसँगै बुधबार भएको पहिलो सेमिफाइनलको खेलमा भारत न्यूजिल्याण्डसँग १८ रनले पराजित भएको छ । मंगलबार नै हुनुपर्ने खेल वर्षाको कारणले प्रभावित भई बुधबार भएको थियो । ४६.१ ओभरबाट खेल सुरु गरेको इंग्ल्याण्डले ८ विकेट गुमाएर भारतसामू २४० रनको लक्ष्य दिएको थियो ।